कस–कसले लेखेकाे गीतले कराेड भ्यूज पायाे ?
Sat, Mar 23, 2019 | 08:36:09 NST
14:09 PM ( 11 months ago )
काठमाडौं, चैत ३० – २०७४ साल नेपाली सिने क्षेत्र संगीतमय बन्यो । सिनेमामा समावेश गीतहरुले सिनेमाको प्रचार प्रसार र व्यापारमा पनि उल्लेख्य योगदान गरे । यस वर्षका केही हिट सिनेमाहरुका गीत संगीतलाई दर्शकले अत्यधिक मन पराए जसका कारण केही गीतहरुले यूट्युबमा करोडौं भ्युज पाए ।
यस वर्ष लोकलयमा तयार भएका केही रोमान्टिक गीतहरू दर्शको रुचिमा परेका छन् । यी गीतहरु नै युट्यूबमा सर्वाधिक कभर गरिने, हरेकजसो साँस्कृतिक कार्यक्रममा गाइने, नाचिने र बज्ने गीत बने । शुक्रबार हामी यस वर्ष करोड भ्युज पाउने गीत र गीतकारका बारेमा चर्चा गर्दै छौँ ।
लोकराज अधिकारी :
यो वर्षको अन्तिमतिर प्रदर्शनमा आएको सिनेमा शत्रु गतेको रुपै मोहनी गीत छोटो समयमा करोड भन्दामाथिको भ्यूज पाउने गीत हो । यो गीतले युट्यूबमा दुईवटा रेकर्ड पनि राख्न सफल भयो । २४ घन्टामा सर्वाधिक ८ लाख ३२ हजार भन्दा बढी पटक हेरिने गीतको रेकर्ड बनाएको रुपै मोहनीले छोटो समयमा ५० लाख पटक हेरिने गीतको दोश्रो किर्तीमान पनि कायम गर्यो । यो गीतका गीतकार हुन् लोकराज अधिकारी ।
धिकारी डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता र गीति लेखनमा सक्रिय छन् । उनले लेखेको ‘तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र’ बोलको आधुनिक गीत मोबाइलको रिङ ब्याक टोनमा सर्वाधिक डाउनलोड भएर रेकर्ड राखेको गीत हो ।
रुपै मोहनी गीतमा संगीत टंक बुढाथोकीको रहेको छ भने स्वर बुढाथोकी र मिना निरौलाको रहेको छ । सार्वजनिक भएको ५३ दिनमा नै करोड भ्यूज पार गरेको गीत यो समाचार तयार पार्दासम्म १ करोड ५७ हजार पटक हेरिएको छ ।
राजनराज शिवाकोटी :
नेपाली युट्यूब इतिहासमा सर्वाधिक भ्यूज पाउने गीत हो, सिनेमा ‘२ रुपैयाँ’मा समावेश ’कुटुमा कुटु’ राजनराज शिवाकोटीको शब्द, संगीत तथा स्वर रहेको यो गीतले यूट्युबमा पाँच करोड ५६ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाएको छ । यस गीतमा राजनराजसँगै मेलिना राई र राजन इशानको स्वर रहेको छ ।
त्यस्तै राजनराजकै ‘चरी चट्ट परी’ पनि करोड भ्यूज पाउने गीत हो । सिनेमा ’कान्छी’मा समावेश भएको यस गीतमा राजनराज र अञ्जु पन्तको स्वर सुन्न सकिन्छ भने शब्द राजनराजकै हो । यस गीतको भिडियोले युट्यूबमा अहिलेसम्म एक करोड ३९ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाएको छ । राजनराज शिवाकोटी गीतकार, संगीतकार र गायकका रुपमा झण्डै दुई दशकदेखि निरन्तर संगीत क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
डा. कृष्णहरि बराल :
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’मा समावेश कसम हो कसम बोलको गीत पनि करोड भ्यूज पाउने गीतको सूचिमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली गीत, गजलका डाक्टर भनेर चिनिने वरिष्ठ गीतकार डा. कृष्णहरि बरालको शब्द रचना रहेको यो गीतमा कल्याण सिंहको संगीत रहेको छ ।
यहि गीतबाट संगीतकार सिंह पनि करोडका संगीतकार बनेका छन् । यस गीतमा सुगम पोखरेलको स्वर रहेको छ । यो गीत युट्यूबमा एक करोड २६ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
अर्जुन पोख्रेल :
यस वर्ष रिलिज भएका गीतहरूमध्ये संगीतकार अर्जुन पोख्रेलले संगीत गरेका तीन गीत करोड भ्यूज कमाउन सफल भएका छन् । अर्जुनका ‘भन्छु आज’, ’तिमी रोएको पल’ र ’किन आजकाल तिम्रो मन मैलो भो’ बोलका गीत करोड भ्यूज पाउने गीत हुन् । ती मध्ये अर्जुनको शब्द रचना रहेको ‘तिमी रोएको पल तिमीलाई’ बोलको गीतले युट्यूबमा करोड भ्यूज पाएको छ ।
सिनेमा ’ऐश्वर्या’मा समावेश यस गीतले अहिलेसम्म युट्यूबमा एक करोड ४८ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाइसकेको छ । गीतमा सुगम पोखरेल र अञ्जु पन्तकै स्वर सुन्न सकिन्छ ।
आधुनिक र सिनेमा संगीतमा राम्रै सँग जमेका संगीतकार हुन् दीपक शर्मा । उनका आफ्नै शब्द रचनाका गीतहरु पनि बजारमा चर्चित छन् । यस वर्ष सार्वजनिकभएको चलचित्र मंगलममा समावेश गीत ‘पर्ख पर्ख मायालु’ले पनि करोड माथिको भ्यूज पाएको छ ।
शर्माको शब्द र संगीतमा तयार भएको गीतले अहिलेसम्म एक करोड ४८ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाइसकेको छ । गीतमा कृष्ण काफ्ले र बिन्दु परियारको स्वर रहेको छ ।
सुदर्शन थापा :
सफल निर्देशकका रुपमा स्थापित सुदर्शन थापा पनि यस वर्षका करोड भ्यूज कमाउने गीतकार बनेका छन् ।
सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’मा समावेश ‘भन्छु आज’ले युट्यूबमा १ करोड ४६ लाख बढी भ्यूज पाएको छ । यो गीत सुदर्शन थापाले लेखेका हुन् । गीतमा अञ्जु पन्त र सुगम पोख्रेलको स्वर छ ।
अम्बिका शर्मा :
अर्जुन पोख्रेलको स्वर तथा संगीत रहेको गीत ‘किन आजकाल तिम्रो मन मैलो भो’ पनि करोड भ्यूज पाउने क्लबमा छ ।
सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’मा समावेश यस गीतले अहिलेसम्म युट्यूबमा एक करोड १२ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाएको छ ।
प्रिन्स नेपाली र दीपकराज गिरी :
‘छक्का पन्जा २’मा समावेश गीत ’ए दाजु’ सार्वजनिक भएलगत्तै विवादमा तानियो । तर दर्शकले यो गीत अत्याधिक रुचाए । सुरुमा अलमोडा राना उप्रेतीको संगीत रहेको भनिएको यस गीतलाई चोरीको आरोप लाग्यो ।
पछि यस गीतको संगीतकारमा कान्छा मगर नेपाली र प्रिन्स नेपालीको नाम राखियो । यस गीतमा शब्द प्रिन्स नेपाली र कलाकार दीपकराज गिरीको रहेको छ । गिरीले ‘छक्का पञ्जा ३’ का लागि पनि आफैले एउटा गीत लेखेका छन् ।
रेकर्डिङको क्रममा रहेको दिपक शर्माले संगीत गरेका छन् । ‘ए दाजु’ले युट्यूबमा दुई करोड २० लाख बढी भ्युजपाएको छ । शत्रु गतेको गीत ‘रुपै मोहनी’ आउनु पूर्व यही गीतले २४ घन्टामा सर्वाधिक हेरिने गीतको रकर्ड बनाएको थियो । यस गीतमा सुजाता वर्मा र अल्मोडा राना उप्रेतीको स्वर रहेको छ ।
दिनेश राउत :
निर्देशक दिनेश राउत पनि यस वर्षका करोड भ्यूज कमाउने गीतकार हुन् । चलचित्र ‘पर्व’मा समावेश ‘काले दाइ’ बोलको आइटम गीतले नेपाली बजार राम्रैसँग ततायो । कोसिस क्षेत्रीको संगीत रहेको यस गीतले युट्यूबमा करोड भ्यूज पाएको छ ।
निश्चल बस्नेत र मीनानिरौलाको स्वर रहेको गीतलाई निर्देशक राउतले लेखेका हुन् । यो गीत अहिलेसम्म युट्यूबमा दुई करोड ३७ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
प्रवेश मल्लिक :
यस वर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’मा समावेश गीत ‘आईएम भेरी सरी’लाई पनि करोड पटक हेरिएको छ ।
यस गीतमा प्रवेश मल्लिककै शब्द, स्वर तथा संगीत रहेको छ । यस भिडियोलाई अहिलेसम्म युट्यूबमा एक करोड २५ लाख बढी पटक हेरिएको छ ।
- उज्यालाे र गफगाफ डटकमकाे सहकार्य